July 28, 2020 – Voice of Myanmar
ထောင်တွေထဲက ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်မမျှတဲ့ နှစ်ရှည်အကျဉ်းသားတွေအတွက် အစိုးရဘာလုပ်ပေးသင့်သလဲ
ထောင်တွေထဲက ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်မမျှတဲ့ နှစ်ရှည်အကျဉ်းသားတွေအတွက် အစိုးရဘာလုပ်ပေးသင့်သလဲ ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၈-၂၀၂၀ အေးချမ်းသူ(VOM) မြန်မာထောင်တွေထဲမှာ အကျဉ်းသားတွေ ပြွတ်သိပ်နေသေးသလို ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ် မမျှမတခံနေရသူတွေရှိနေပါတယ်။ လက်ရှိထောင်တွေ အလုပ်စခန်းတွေထဲမှာ အကျဉ်းသား ဘယ်လောက်ရှိနေလဲ ? နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလို့သတ်မှတ်ခံရသူ ဘယ်လောက်ရှိနေလဲ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတက နောက်ဆုံးပေးတဲ့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာမှာ ကျွန်းဒဏ်ခံရသူတွေ နှစ်တည်မပေးတော့ မကျေမနပ်ကြပါဘူး ဘာလို့အဲလိုလုပ်တယ်ထင်သလဲ၊ ဒါကိုအစိုးရနဲ့ အေအေပီပီက ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်သလဲ စတာတွေကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းရဲ့ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုကြည်ကို ဗီအိုအမ်ဝိုင်းတော်သား ကိုအေးချမ်းသူက တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။ #voiceofmyanmar #VOM #ရန်ကုန် Zawgyi ေထာင္ေတြထဲက ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မမွ်တဲ့ ႏွစ္ရွည္အက်ဥ္းသားေတြအတြက္ အစိုးရဘာလုပ္ေပးသင့္သလဲ ရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္ ၂၈-၂၀၂၀ ေအးခ်မ္းသူ(VOM) ျမန္မာေထာင္ေတြထဲမွာ အက်ဥ္းသားေတြ ႁပြတ္သိပ္ေနေသးသလို ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ မမွ်မတခံေနရသူေတြရွိေနပါတယ္။ လက္ရွိေထာင္ေတြ အလုပ္စခန္းေတြထဲမွာ အက်ဥ္းသား ဘယ္ေလာက္ရွိေနလဲ ? ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလို႔သတ္မွတ္ခံရသူ…
ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ အနီးကပ်လုံခြုံရေးအကြံပေး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံနေရ
ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ အနီးကပ်လုံခြုံရေးအကြံပေး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံနေရ ဝါရှင်တန်၊ ဇူလိုင်-၂၈-၂၀၂၀ မျိုးဆက် (VOM) အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး ရောဘတ်အိုဘရိုင်ယန်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံနေရတယ်လို့ အိမ်ဖြူတော်က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အိုဘရိုင်ယန်မှာ အပျော့စားရောဂါလက္ခဏာတွေပြသနေတာကြောင့် သီးခြားနေထိုင်စေကာ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေတယ်လို့ ဇူလိုင် ၂၇ ရက်မှာ အိမ်ဖြူတော်က ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံနေရပေမယ့် သမ္မတထရန့် သို့မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတ မိုက်ပင့်စ်တို့မှာ ကူးစက်မှုအန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ အိမ်ဖြူတော်ကပြောပါတယ်။ အိုဘရိုင်ယန်ဟာ ယခုလအစောပိုင်းမှာ ဖလော်ရီဒါကိုသွားရောက်တဲ့ ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့အတူ လိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ သူနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ ဒေါ်နယ်ထရန့်က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။ အိမ်ဖြူတော်ဟာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးမှုတွေ ပုံမှန်ပြုလုပ်လျှက် ရှိပါတယ်။ အိုဘရိုင်ယန်ဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူဝန်ထမ်းတွေထဲမှ ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် တောင်ပိုင်းနဲ့ အနောက်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေ…